Megangelyo doonis oo kaliya ma ahan habka lagu yimaado Finland. Waxaad ogolaanshaha degitaanka Finland ku codsan kartaa sababo shaqo ama waxbarasho. - Asylum in Finland
Codsasho megangelyo ma ahan habka kaliya ee lagu yimaado Finland. Haddii aad tahay muwaadin wadan kale oo aan aheyn wadamada Midowga Yurub aadna dooneyso in aad u soo guurto Finland waqti ka badan saddex bilood, waxaad u baahan tahay ogolaansha degitaanka. Ogolaanshaha degitaanka waxaad Finland uga codsan kartaa shaqo, waxbaraso ama xiriir qoys. Xeerka koowaad waa in ogolaanshaha degitaanka la codsado kahor imaanshaha Finland.
Haddii aad dooneyso in aad ka shaqeyso Finland waxaad u baahan tahay ogolaanshaha degitaanka. Marka aad shaqo hesho waxaad codsan kartaa ogolaanshaha degitaanka. Shaqo sameynta a darteed waxaad u baahan tahay ogolaanshaha degitaanka ee shaqaalaha ama ogolaansho kale ee degitaan oo ay ku jirto xuquuqda shaqo sameynta. Nooca ogolaansha waxaa saameyn ku leh nooca shaqo ee aad Finland u imaaneyso in aad ka sameyso.
Waxaad u baahan ogolaanshaha degitaanka haddii aad dooneyso in aad wax ka barato Finland. Kahor inta aadan codsan ogolaanshaha degitaanka waa in aad boos waxbarasho ka heshaa Finland. Ogolaanshaha waa lagu siin karaa, haddii
aad boos waxbarasho ka heysato machad waxbarasho oo Finnish ah
ay waxbarashadaadu tahay mid ku gaarsiineysa xirfad ama shahaado
aad heysato dhaqaale kuugu filan waxbarasho
aa leedahay ceymis jirro.
Waxaad codsiga warqadda ah ee ogolaanshaha degitaanka ee shaqada ama waxbarashada uga codsan kartaa wakiilka Finland, laakin habka codsi ee ugu dhaqsaha badan islamarkaasna ugu raqiisisan waa kan elekterikaalka ah. Si kastoo ay ahaataba xusuusnow in haddii aad codsigaada u dirtay qaab elekterikaal ah ay qasab kugu tahay in aad booqato wakiilka Finland si aad isu caddeyso una soo bandhigto lifaaqyada codsigaada ee asalka ah. Waxaad tegi kartaa wakiilka Finland ee dalkaada ku yaal ama kan ku yaal wadan kale oo aad si sharci ah ku joogi karto ama booqan karto.
Haddii aad dooneyso in aad Finland safar ku timaado waqti gaaban, tusaale ahaan safar fasax ama booqasho qaraabo, waxaad u baahan tahay fiiso haddii aadan aheyn muwaadin u dhashay dal aan fiiso looga baahneyn. Fiisadu waa ogolaanshaha soo gelitaanka dalka oo loogu talagalay joogitaan waqti gaaban oo ku meelgaar ah, waxeyna shaqeysaa ugu badnaan saddex bilood.
Kahor inta aan lagu siinin ogolaanshaha degitaanka ama fiiso, waa in aad buuxisaa shuruudaha guud ee soo gelitaanka dalka.
Ku sii aqri ingiriis
Coming to study in Finland
The Enter Finland e-service
codsiga megangelyda ogolaansha degitaanka shaqo waxbarasho